Amaqembu aphikisayo ahlukene phakathi ngokubanjwa kokhetho olusheshayo | News24
Amaqembu aphikisayo ahlukene phakathi ngokubanjwa kokhetho olusheshayo
Cape Town – Amaqembu aphikisayo kuleli asekhombise ukubumbana emasontweni edlule ekunxuseni ukuthi uMengameli Jacob Zuma ehle esikhundleni, kodwa kubukeka sengathi ahlukene phakathi ngokuthi yini okumele yenzeke uma ngabe siba yimpumelelo isiphakamiso sokungamethembi uMengameli Jacob Zuma.
IDemocratic Alliance (DA) ePhalamende ngoLwesibili ithe kuzoba ngcono uma ngabe izwe libamba ukhetho olusheshayo uma ngabe uZuma ekhishwa emandleni ngevoti esiphakamisweni sokungamethembi ngomhlaka-8 Agasti.
USotswebhu omkhulu weDA, uJohn Steenhuisen, uthe umholi weqembu, uMmusi Maimane, useke wakusho ukuthi iDA ingathanda ukuthi kube nokhetho olusheshayo uma ngabe uZuma neKhabhinethi yakhe bekhishwa ngevoti.
“Into iNingizimu Afrika enayo akusiyo [nje] inkinga kaJacob Zuma, inkinga ye-ANC,” uSteenhuisen usho kanjalo ecaphuna uMaimane.
“Kuzoba ngcono uma ngabe izwe liya okhethweni bese likhetha uhulumeni omusha okhethweni olusha.”
Kodwa-ke i-Economic Freedom Fighters kanye ne-United Democratic Movement bayasichitha lesi siphakamiso sokhetho olusheshayo, nalapho eminye imithombo engaphakathi ithi lokhu kuzokwenza amaLungu ePhalamende e-ANC abe manqika ukweseka leli ivoti lokungamethembi uMengameli Zuma.
INews24 iyakuqonda ukuthi abaholi bamaqembu aphikisayo bebelokhu bebambe izingxoxo namaLungu ePhalamende e-ANC, bebathembisa ukuthi lesi siphakamiso sokungathembi uMengameli Zuma, asihlosile ukukhipha uhulumeni we-ANC, kodwa uZuma kuphela.
Amaqembu aphikisayo adinga okungenani amavoti angu-50 kumaLungu e-ANC ukuze isiphakamiso sokungamethembi uMengameli Zuma siphumelele.